Ama-Smartphones ama-5 anesikrini esincane | Izindaba zamagajethi
Ama-Smartphones ama-5 anesikrini esincane
AmaVillamandos | | AmaSelula
Imakethe yamaselula iguqukele ngokuhamba kwesikhathi yaya kuma-Smartphones anezikrini ezikhula ngokwengeziwe. Ubufakazi balokhu ukuthi kuya ngokuya kube lula ukuthola amadivayisi ahlukile asinikeza isikrini esingu-6-intshi nokuthi kwesinye isikhathi aze adlule leli nani elikhulu lama-intshi. Noma kunjalo kusekhona inani elikhulu labasebenzisi abafuna ama-terminals ngesikrini esincane kakhulu.
Futhi yize kungabonakala Abakhiqizi abaningi basanikela ngamadivayisi anezikrini eziphakathi kwamasentimitha amane kuya kwayisi-4. Ezimweni eziningi, zingamamodeli amancane noma ahlanganisiwe we-flagship yazo, okuthi ngaphandle kokuba nesikrini esincane, agcine izici ezibabazekayo nezincazelo ziqinile ezimweni eziningi.
Uma kwenzeka ufuna i-smartphone ekunika isikrini esikhulu kakhulu futhi esingaba ngamasentimitha angu-4,5, ungabe usaqhubeka ngoba kule ndatshana sizokunikeza ama-5 amadivayisi weselula ahamba phambili emakethe angenakho okukhulu kakhulu isikrini.
1 I-Sony Xperia Z5 Compact
2 I-Samsung Galaxy A3
4 I-Motorola Moto E 4G
I-Sony Xperia Z5 Compact
AbakwaSony Xperia Z5 Ingenye yama-smartphones amahle kakhulu atholakala emakethe namuhla futhi i-Xperia Z5 Compact yinguqulo encishisiwe yale flegi enamandla. Inesikrini esingu-4,6-intshi esine-HD resolution, okungenye yezimo ezibalulekile okumele i-terminal ibe nayo ukuze ivele kulolu hlu.
Ngokulandelayo sizobukeza kafushane ifayela le- izici eziyinhloko nokucaciswa kwale Xperia Z5 Compact;
Ubukhulu: 127 x 65 x 8.9 mm
Isikrini esingu-4,6-intshi esinokulungiswa kwe-HD ngamaphikseli angu-1.280 x 720 no-320 dpi
Processor: I-Qualcomm Snapdragon 810
Isitoreji sangaphakathi esingu-16GB sinwebeka ngekhadi le-MicroSD
Ikhamera yangemuva engama-megapixel angama-23 nekhamera yangaphambili engu-5 megapixel
2.700 mAh ibhethri
Ngenxa yalokhu kuchazwa, umuntu angabona ukuthi lokhu akuyona nje i-smartphone, nokuthi yize enesikrini esincane, amandla nokusebenza kwayo kukhulu kakhulu.
Uma ufuna ifoni ephathekayo enesikrini esikhulu kakhulu, le Xperia Z5 Compact ingaba enye yezinketho ezinhle kakhulu, futhi uziqhayisa ngekhamera evelele.
Ungathenga lokhu I-Sony Xperia Z5 Compact nge-Amazon ngentengo yama-euro angama-420.
I-Samsung Galaxy A3
Iningi lamadivayisi eselula e-Samsung ahluka kakhulu esikrinini sawo, esezingeni eliphakeme nesinqumo esihle kakhulu, kodwa futhi ngosayizi omkhulu. Kodwa-ke, emndenini wama-terminals we-Galaxy kukhona nendawo yama-smartphones anezikrini ezincane.
Isibonelo ukuthi I-Samsung Galaxy A3 lokho kune- ukwakheka kwe-aluminium ngokucophelela, isikrini esingu-4,5-intshi SuperAMOLED namandla angaphezu kokuthakazelisa.
Lezi yizici eziyinhloko nokucaciswa kwale Galaxy A3;
Ubukhulu: 130,1 x 65,5 x 6,9 mm
Isikrini esingu-4,5-intshi esinokulungiswa kwamaphikseli angama-960 x 540 ne-245 dpi
Processor: I-Qualcomm Snapdragon 410
Isitoreji sangaphakathi esingu-16GB
Ikhamera yangemuva engama-megapixel angama-8 nekhamera yangaphambili engu-5 megapixel
1.900 mAh ibhethri
Akungabazeki ukuthi sibhekene ne-smartphone enezici ezilungisiwe, esingazibeka kulokho okubizwa ngokuthi maphakathi nohlu lwemakethe, kepha lokho kungaba njalo uma sifuna ithuluzi elincane, kodwa elinamandla, elicishe liphelele.
Intengo yalokhu I-Samsung Galaxy A3 Okwamanje kungama-euro angama-244, yize kuya ngokuthi uyithenga kuphi ungonga ama-euro ambalwa. Ngokwesibonelo E-Amazon ungayithenga ngama-euro angama-240.
I-Apple ihlale ikhetha amadivayisi eselula anezikrini ezingaphansi kwama-intshi ama-5, yize kufika i-iPhone 6 iphinde yethula inguqulo enesikrini esikhudlwana futhi ngenhloso yokuhlangabezana nezidingo zabo bonke abasebenzisi.
Ukuthenga okuhle, uma lokho esikufunayo kuyi-smartphone enesikrini esincane, kungahle kube yifayela le- iPhone 5S, Esinikeza isikrini esingu-4-intshi, umklamo omuhle namandla amakhulu azosivumela ukuthi senze noma yimuphi umsebenzi nge-terminal yethu.
Yize i-iPhone 5S itholakale emakethe isikhashana, isenayo eminye ngaphezu kwezici ezithakazelisayo nezincazelo, njengoba sibona ngezansi;
Ubukhulu: 123,8 x 58,6 x 7,6 mm
Isikrini esingu-4-intshi esinokulungiswa kwamaphikseli angama-1136 x 640 ne-326 dpi
Umseshi: Apple A7
Isitoreji sangaphakathi esingu-16GB asinwebeki ngekhadi le-MicroSD
Ikhamera yangemuva engama-megapixel angama-8 nekhamera yangaphambili engu-1.2 megapixel
Ngeshwa Intengo ye-iPhone 5S, ngaphandle kokuthi inguqulo yakudala ye-iPhone isephezulu impela, noma ngabe ufuna ukuthola uhlobo olwehlisiwe, ngokuya ngesikrini, le iPhone ingaba inketho enhle kakhulu.
Vele, mhlawumbe ungalinda nezinsuku ezimbalwa, kuze kwethulwe ngokusemthethweni i-iPhone 5se, okuzocatshangelwa ukuthi izoba nesikrini esincane nokucaciswa okuvuselelwe kakhulu futhi okwenziwe ngcono uma kuqhathaniswa nale iPhone 5S.
Kuze kube namuhla, le iPhone 5S iyaqhubeka nokuhweba okuphezulu namanani entengo ayo aphakathi kwama-euro ayizi-400 kuya kuma-450 kuya ngokuthi siyithenga kuphi i-terminal. E-Amazon ngokwesibonelo singakuthola lokhu I-iPhone 5S yama-euro ayizi-410. Kulindeleke ukuthi, njengoba sishilo phambilini, le ntengo ingancishiswa kakhulu ngokufika kwe-iPhone entsha emakethe ezosinika isikrini se-4 noma 4,5-intshi.
I-Motorola Moto E 4G
La Umndeni wakwaMoto E, enezinguqulo ezihlukile, kungenye inketho ethokozisayo yokukwazi ukuba ne-smartphone enesikrini esingu-4,5-intshi futhi nezinzuzo zesikhumulo esiphakathi nendawo futhi ngakho-ke ilungele noma imuphi umsebenzisi ongafuni kakhulu kudivayisi yabo.
Uma lokhu esikufunayo kuyi-smartphone eyisilo sangempela, ngaphandle kobukhulu bayo nosayizi omncane, lokhu I-Motorola Moto E 4G Akufanele kube inketho enhle futhi njengoba sesishilo vele ukuthi yidivayisi ebangeni eliphakathi, nalokho uma isici esithile esimangazayo.
Lezi yizo izici eziyinhloko nokucaciswa kwale Motorola Moto E 4G;
Ubukhulu: 129,9 x 66,8 x 12,3 mm
Isikrini esingu-4,5-intshi esinokulungiswa kwamaphikseli angama-960 x 540 kanye nama-245 dpi
Isitoreji sangaphakathi esingu-8GB sinwebeka ngekhadi le-MicroSD
Ikhamera yangemuva eyi-5 megapixel ne-VGA ngaphambili
Akungabazeki ukuthi lena akuyona i-smartphone esezingeni eliphezulu, kepha kunalokho iyisetshenziswa sebanga lokungena, elilinganiselwe kakhulu ngokusebenza singathenga ngentengo engaphansi kwama-euro angama-100.
Ukuvala lolu hlu sinqume ukuvula indawo I-Xiaomi Redmi 2, ifoni ephathekayo enesikrini esingu-4,7-intshi. Ngesitembu sokuqamba esingaqondakali somkhiqizi waseChina, lesi siginali sinakho okungaphezulu kokucacisiwe okuthokozisayo kanye nentengo encishisiwe, eyenza itholakale kunoma yimuphi umsebenzisi nephakethe.
Uma ufuna i-compact compact, le Xiaomi terminal ngokungangabazeki kufanele ibe enye yezinketho zakho eziyinhloko, noma ngeshwa kufanele uyithenge ngomuntu wesithathu, ngoba umenzi waseChina okwamanje akawathengisi amadivayisi akhe ezweni lethu.
Ngokulandelayo sizobuyekeza ifayela le- izici eziyinhloko nokucaciswa kwale Xiaomi Redmi 2;
Ubukhulu: 133.9 x 67,1 x 9,1 mm
Isikrini esingu-4,7-intshi esinokulungiswa kwamaphikseli angama-1.280 x 720 kanye nama-313 dpi
Ikhamera yangemuva engama-megapixel angama-8 nekhamera yangaphambili engu-1.6 megapixel
Phakathi kokuthengisa, ngaphezu kwalokhu esesishilo ngakho, kukhona ukuhambisana okugcwele nesitolo esisemthethweni sohlelo lokusebenza lweGoogle noma yini efanayo neGoogle Play, into ngeshwa engenzeki kuwo wonke amatheminali abakhiqizi baseChina.
Ungathenga lokhu Ayikho imikhiqizo etholakele.Yize uma ungenankinga nokulinda ukuyithola, ungayithenga ngesinye sezitolo eziningi ezinemvelaphi yaseChina ezitholakala kwinethiwekhi yamanethiwekhi nalapho ungakuthola khona ngentengo yokuthengiselana.
Ngaphandle kokuthi amadivayisi eselula aguqukele kwizikrini ezikhula ngokuya ngokuhamba kwesikhathi, kusenama-smartphones emakethe anezikrini ezincane zabo bonke labo abathanda amadivayisi ahlanganayo angahlali isikhala esiningi emaphaketheni akho.
Kulolu hlu sikubonise kuphela amatheminali ama-4 anesikrini esincane, kepha ungangabazi ukuthi kukhona okunye, nakho okuthakazelisayo impela, kepha sinqume ukukhetha lesi sikhathi, lezo esizibonisile. Mhlawumbe isikhashana sizokwenza uhlu olusha, sifake amanye amadivayisi futhi sengeze izindaba ezingase zifike emakethe maduzane.
Ingabe ungomunye walabo abakhetha idivayisi yeselula enesikrini esincane?. Sitshele izizathu zakho esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi lapho sikhona futhi sifuna ukuthi uxhumane nathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ama-Smartphones ama-5 anesikrini esincane
Kubonakala kimi ukuthi kunezinye izingcingo ezisezingeni eliphakeme ezinezikrini zalabo sayizi, njengeBlackBerry Z10 noma z30 ezinamandla noma ezinamandla kakhulu kunalezi ozibonisayo.
Ngivumelana ngokuphelele nawe, kuhle, kepha zombili iZ10 ne-Z30 sezivele zalahleka ezingqondweni zabasebenzisi abaningi.
Ozithobayo futhi ngiyabonga ngokuphawula kwakho!
Uma ubeka i-xiaomi engu-4,7 ngoba awubeki isikrini se-iphone 6 / s sehliselwe ku-4.7 futhi ukhuluphele ngokweqile zonke ezinye.
Ubude nobubanzi bemishini okwenza bube bukhulu
Umuntu ngamunye unambitha weqembu
Kepha okuceliwe yimishini engemikhulu kangako futhi eno-sis osezingeni eliphezulu ongaba yiyo
I-LG G5 vs LG G4, ngabe kukhona okunye ngaphandle kwamamojula?
Sihlaziya iSanDisk Connect Wireless Stick, i-USB engenantambo ye-Android ne-IOS